magicpower၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
MalemagwayMyanmar Like0members like this
ဘလော့များဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ magicpower's Likes Magicpower's ၏မိတ်ဆွေများ
magicpower commented on aungaung's blog post 'မြန်မာတို့ ရှိခိုးနေကျ သြကာသဘုရားရှိခိုး'"သာဓုပါ သာဓု"Nov 25, 2011magicpower commented on ♣တောသူမလေး♣'s blog post 'ဘုရားပွင့်တော်မူစ သာသနာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်လာပုံ'"သာဓု၊သာဓု၊သာဓု။"Nov 24, 2011magicpower commented on nweniwinmacho-နန္ဒစာရီ's blog post 'ပခုက္ကူ ရေဘေးခရီး စဉ်မှတ်တမ်း'"သာဓုပါ ဆရာလေး သာဓု၊သာဓု"Nov 24, 2011magicpower commented on အရှင်ဝိမလဝံသ's blog post 'သစ္စာဆိုရာ၌ လိုက်နာမည့်အချက်များ'"ကျေးဇူးကြီးလှပါတယ် အရှင်ဘုရား။"Nov 17, 2011magicpower commented on aungaung's blog post 'စိတ္တနိယာမတရား'"သာဓုပါ..."Nov 14, 2011magicpower commented on အရှင်ဝိမလဝံသ's blog post 'အရွယ်လွန်အိုမင်းသော မိဘများကိုလုပ်ကျွေးသင့်ခြင်းအကြောင်း'"ကျေးဇူးကြီးမားလှပါတယ် ဦးပဇင်း"Nov 14, 2011magicpower commented on အရှင်ဝိမလဝံသ's blog post 'ပရိတ်တော် ဂါထာတော် ဂုဏ်တော် များကို တန်ခိုးထက်မြက်အောင်ရွတ်ဆိုနည်း'"ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိလှပါတယ် ဦးဇင်း ဘုရား တပည့်တော်ရဲ.အကောင့်ကတော့ magicpower438@gmail.com"Nov 7, 2011စန္ဒာ leftacomment for magicpower"
လာလည်ပါတယ် . ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်"Oct 31, 2011စန္ဒာ leftacomment for magicpower"
စန္ဒာ လာလည်ပါတယ်.ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်."Sep 24, 2011စန္ဒာ leftacomment for magicpower"
ကောင်းသောနေ့လေး ဖြစ်ပါစေရှင်..."Sep 6, 2011magicpower leftacomment for စန္ဒာ"စန္ဒာလည်းပျော်ရွှင် အစ်ကိုလို ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။"Jul 30, 2011စန္ဒာ leftacomment for magicpowerJul 23, 2011magicpower leftacomment for စန္ဒာ"ညီမရေ ကိုယ်စာမျက်နှာမှာ သီချင်းဘယ်လိုထည့်ရမလဲ ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပေးပါ..."Jul 18, 2011စန္ဒာ leftacomment for magicpower"ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေရှင်...
"Jul 17, 2011magicpower postedastatus"နတ်လူသာဓုခေါ်စေသော်။"Jul 17, 2011 0
magicpower postedastatus"ယနေ.မွေးနေ.တွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူခဲ့ပါသည်...နတ်လူသာဓုနိုင်ပါစေ။"Jul 17, 2011 0
6:55pm အချိန်October 31, 2011, တွင်စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ လာလည်ပါတယ် . ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင် 5:33pm အချိန်September 24, 2011, တွင်စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ စန္ဒာ လာလည်ပါတယ်.ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်. 8:53pm အချိန်September 6, 2011, တွင်စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ စန္ဒာ လာလည်ပါတယ်.
ကောင်းသောနေ့လေး ဖြစ်ပါစေရှင်... 7:32pm အချိန်July 23, 2011, တွင်စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ 11:25pm အချိန်July 17, 2011, တွင်စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေရှင်...
11:53pm အချိန်June 4, 2011, တွင်စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
mun mun aung ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Top News · Everything thein wai posted blog postsဘုရား၊ ရဟန္တာဓာတ်တော်ဟူသည်။ပြုပြင်စရာတွေ ပြုပြင်ကြပါ။24 minutes agodimplemit and ucandima are now friends1 hour agoThaung Tan posted blog postsအဓိပတိ(၃)ပါးထားပြီး တရားအားထုတ်ပါအဓိပတိ(၃)ပါးထားပြီး တရားအားထုတ်ပါ1 hour agothuthunaing posted photos2hours agoမူကြိုဆရာ posted blog postsတောင်ဖီလာဆရာတော်၏ သီလဂုဏ်တောင်ဖီလာဆရာတော်နှင့် စက်တော်ရာနှစ်ဆူ ရှာဖွေခြင်းနမော တေ ဂါထာတော်3 more…3 hours agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ခန္တီ နဲ့ ဥပေက္ခာ ဘာများထူးခြားသလဲ'3 hours agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'မဟာသမယသုတ် (မြန်မာပြန်)'3 hours agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'သာသနာမည်သူ ပြုသနည်း'3 hours agoSoe Gyi shared thein wai's blog post on Facebookပြုပြင်စရာတွေ ပြုပြင်ကြပါ။3 hours agoSoe Gyi liked thein wai's blog post 'ပြုပြင်စရာတွေ ပြုပြင်ကြပါ။'4 hours agomun mun aung liked dimplemit's blog post 'ပုညကြိယ၀တ္တု(၁၀)ပါး'5 hours agoThaung Tan liked dimplemit's blog post 'တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၂'6 hours ago More... RSS